On the rock: 2013
သိန်းစိန် ထိပ်ပြောင်၊ မအေလိုးကောင်
ငစိန်နဲ့ ငလှိုင် မကွဲပြား
၁၉ လကြာ စစ်တိုက်တာ၊ မုဆိုးမတွေ များပြားလာ
ငစိန်၊ ငလှိုင် ဂရုမစိုက်ပါ၊
မုဆိုးမတွေ ဘယ်လောက်များများ၊ စစ်သား သောင်းချီ ပို့လွှတ်ထား
တိုက်လေယာဉ်တွေလည်း မနေမနား၊ တိုက်လိုက် ကျလိုက် မရပ်မနား
ကေအိုင်အို ကို အပြုတ်တိုက်ချင်၊ ပြောစကားလည်း များပြီထင်
စောက်ပြောကတော့ ပျားတကာလို၊ လုပ်ရပ်ကတော့ ပြောင်းပြန်ဆို
ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားရင်၊ နိုင်ငံတိုးတက်မယ် မထင်
လွယ်လွယ်လေးကိုခက်အောင်လုပ်၊ ငစိန်နဲ့ ငလှိုင်တို့ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်
ညညကျရင် မယားကိုမေး၊ လိုးဖို့တောင် အချိန်မရဘူးလေး
ငစိန်နဲ့ ငလှိုင် မမှတ်သေး၊ ခက်လှတယ်လေး..
သန်းရွှေ မရှိတုန်း၊ လူလစ်တုန်း၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဦးနှောက်သုံး
လီးတုနဲ့ အာသာဖြေ၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် အားမရပေ''
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် အကြံရ၊ ငစိန်နဲ့ ငလှိုင်ကို ခေါ်ပြီးပြ''
ငစိန်နဲ့ ငလှိုင် ခပ်ကြောင်ကြောင်၊ သူတို့ လီးတွေတောင်
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး၊ သိန်းစိန် ကုန်းမှုတ်ပြီး
မင်းအောင်လှိုင်က လျှာနဲ့ ကလိ၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ စောက်စိ
စောက်ပျင်းထူတော့ ရေမဆေး၊ အရသာက ငံကျိကျိလေး
စောက်ရည်များစွာ ထွက်ကျလာ၊ မင်းအောင်လှိုင်က မျိုချရှာ
သိန်းစိန် ကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း၊ ကြိုင်ကြိုင့်ဟာကို နမ်း
ဗြုန်းကနဲဆို သန်းရွှေရောက်၊ သူတို့သုံးယောက် အ၀တ်ကောက်
အမလေး..လေး.. အလိုလေး၊ သန်ရွှေ အော်သံပေး
တံခါးစောင့်များ ရောက်လို့လာ၊ မြင်ကွင်းကတော့ဗျာ
ငစိန် ငလှိုင် တောင်းပန်ရှိခိုး၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကို လက်ညိုးထိုး
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က ပြုံးစိစိ၊ ရှက်ရမှန်းလည်းမသိ
သန်းရွှေ ခမျာ ရင်ထုမနာ၊ ရေရွတ်နေတာ "သွားပြီဗျာ"
သန်းရွှေ ဖင်ချ၊ သိန်းစိန် ခံသဗျ
မင်းအောင်လှိုင်က လီးနဲ့ထိုး၊ သိန်းစိန် ပါးစပ်ကိုလိုး
ပြီးတော့ သူ့အလှည့်၊ သိန်းစိန် ပြန်ဖဲ့
မင်းအောင်လှိုင် ဖင်ကုန်း၊ သိန်းစိန် အားရပါးရကြုံး
သန်းရွှေ ထိုင်ငေး၊ သိန်းစိန် လီးသေးသေးလေး
ဒါနဲ့ အားမရ၊ လီးတုကြီးနဲ့ သိန်းစိန် ပြန်ချ
မင်းအောင်လှိုင် ထအော်၊ သိန်းစိန် ဆက်ဆော်
ခုတော့ သန်းရွှေကို ပြန်ကိုင်၊ သိန်းစိန်နဲ့ မင်းအောင်လှိုင်
သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုး၊ သန်းရွှေ စိတ်ဆိုး၊ ဆဲတော့ မအေလိုး
ကြာတော့ ယိုင်တိယိုင်တိုင်၊ သန်းရွှေ မခံနိုင်
ဒါပေမယ့် သုတ်ထွက်ခါနီး၊ သန်းရွှေကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး
ငစိန်နဲ့ ငလှိုင် မြန်မြန်ချ၊ သုတ်ရည်ထွက်ကျ
အ..အ..အ..ဟ..ဟ..ဟ.. ပြီးပြီဗျ.. သန်းရွှေရ.
ဂျန်မိုင်ကောင်း ရပ်ကွက် သိခါတော်ရ ဆရာ REV. လဖိုင်းဂျာနော် ကို သေနတ်ဖြင့် မတရား လိုက်လံ ပစ်ခတ်ခဲ့ ပါညည်။
ဆုတောင်း အစီအစဉ် မှ အပြန်လမ်း တွင် ဗမာစစ်သားများမှ စစ်ဆေး ဖို့ရန် အတွက် ရပ်၊ လို့ပြောသောအသံ အား REV.လဖိုင်ဂျာနော် မကြားသဖြင့် ဆက်လက် လျှေက်နေစဉ် နှောက် မှ သေနတ်ဖြင့် မတရား လိုက်လံ ပစ်ခတ်ခဲ့ ပါညည်။ ယခင် က မြစ်ကြီးနား မြိုတွင်း လမ်းတွင် စစ်တပ် မှ စစ်ဆေးရေး ဂိတ် မရှိခဲပါ။ ယခု ချိန်တွင် ဗမာစစ်တပ် မှ စစ်သားများ မြို့တွင် ပြည်သူ များ အာ်း မတရား စစ်ဆေး မေးမြန်း နေပါညည်။